Doro trano niniana natao? Jeneraly misotro ronono sy ny vadiny maty tao anaty haintrano | NewsMada
Tao amin’ny efitrano iray ambany rihana no nahitana ny fatin’ilay jeneraly, nihohoka sady nihosin-dra . Tahaka izany koa no nahitana an-dramatoa vadiny, tao an-dakozia. Ahina ho doro trano niniana natao no nahatonga ny fahamaizan’ny tranon’izy ireo, ao Antaniavo, afakomaly alina…
Nitrangana haintrano tao amina tranona jeneraly iray efa misotro ronono monina ao Antaniavo Antsirabe, afakomaly alina tamin’ny 11 ora. Tonga teny an-toerana ny polisy avy ao amin’ny UIR nijery ny zava-misy sy nanavotra ilay jeneraly. Hita faty tao an’efitrano iray tao ambany rihana ilay jeneraly raha tany an-dakozia no nahitana ny fatin’ny vadiny, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny fitaleavam-paritry ny polisim-pirenena (DSRP) Vakinankaratra. Tsy fantatra mazava ny antony nahatonga ny firehetana fa ny afo nijoalajoala nahazo ny trano iray manontolo no nahataitra ny olona teo amin’ny manodidina ary tapitra kila hotohoton’ny afo tsy nisy noraisina intsony ny trano manontolo. Ny loharanom-baovao hafa kosa anefa milaza fa izy mivady miaraka amin’ny tovolahy mpanampiny iray no mipetraka ao amin’ity trano ity. Nambaran’ilay mpanampiny fa any ambony rihan’ny trano izy no matory amin’ny alina ka naheno fipoahana mafy tao an-trano izy tamin’io fotoana io ary niaraka tamin’izay, nirehitra ny trano. Nijoalajoala ny afo ka ireo fokonolona teo an-toerana no nifanome tanana tamin’ny famonoana ny mialoha ny nahatongavan’ny kamiaoben’ny orinasa Smatep namono ny afo. Nisedra olana rahateo ny kamiaoben’ny mpamonjy voina ao Antsirabe ka tsy afa-nanao ny asam-pamonjena tamin’ity voina ity.
Fanafihan-jiolahy narahina vonoan’olona…
Efa tamin’ny 1 ora sy 25 mn vao voafehy ny afo, raha ny fanazavan’ny polisy. Nandritra ny fitsirihana nataon’ny polisy no nahitana fa hita faty nihidy tao an’efitrano fatoriany tao ambany rihana ilay jeneraly, nihohoka teo akaikin’ny farafara sady nihosin-dra. Ramatoa vadiny kosa hita faty nihosin-dra tao an-dakozia, tsy misy fitafiana intsony ny tapany ambany.
Miteraka resabe ao Antsirabe hatrany anaty tambajotran-tserasera ny fahitana ity haintrano nahafatesana jeneraly mivady ity. Manahy ny rehetra fa fanafihan-jiolahy narahina vonoan’olona tsotra izao ity raharaha ity. Manaporofo izany rahateo ny nahitana ny vadin’ilay jeneraly mitanjaka ny tapany ambany. Hita tao an-dakozia ihany anefa ny akanjony. Rehefa vita kosa ny asa ratsin’ireo jiolahy vao mety nodoran-dry zalahy ny trano mba tsy hahafantarana ny marina rehetra. Ny valin’ny fanadihadiana ataon’ny polisy anefa no ahafantarana ny marina rehetra momba ity raharaha ity. Efa lasan’ny fianakaviany kosa ny fatin’izy mivady niharam-boina tao amin’ity trano ity.